﻿	Ofe Agbamakwụkwọ Italian - Ezi Ntụziaka
ebe ịzụta pepemint ogbugbo swiiti
ihe na-aga nke ọma na eghe zucchini
10 oz ogbe oyi kpọnwụrụ na-emetụta ole ọ dị ọhụrụ
Ofe Agbamakwụkwọ Italian
Italia agbamakwụkwọ bụ obi, kpochapụwo ofe mere na stovetop! Ntụziaka a na-ezukọta ngwa ngwa maka nri izu ụka zuru oke!
-esi mee ka a amịkpọ pan
Tinye ụfọdụ Nkeji 30 nri abalị ma ọ bụ a nnukwu iberibe achịcha na a ọhụrụ salad iji wepụta nri!
Oge a n’afọ, ofe bụ nri aga anyị. N’abalị oyi na-atụ oyi, ọ dịghị ihe dị mma karịa ịgbanye aka abụọ n’otu ofe na-ekpo ọkụ, nke na-agba ure! Nọmalị anyị na-aga maka a ejiri obi kacha mma ma ọ bụ ofe nduku ofe , ma n’oge na-adịbeghị anya ana m enweta arịrịọ maka kpochapụwo Efere agbamakwụkwọ Italian .
Maka eji megharịa ọnụ, anyị hụrụ n'anya ịgbakwunye Piopu Tapioca ma ọ bụ Nri Ricey Pudding , ma zuru oke iji kpoo gị site n'ime.
Kedu ihe kpatara eji akpo ya ofe di na nwunye ndi Itali?
Na-eche mgbe ọ ga - esi nweta aha ya? Mgbe m na-eche ma eleghị anya ọ bụ a omenala nri jere ozi na Italian agbamakwụkwọ, ma n'ezie, ọ nwere ihe ọ bụla na-eme na a ezigbo agbamakwụkwọ. Aha ahụ sitere na ụzọ esi atọ ụtọ, dịka alụmdi na nwunye obi ụtọ!
uzommeputa asaa oyi akwa salad na ebe ana-azu umuanu mgbakwasa
Kedu Pasta Eji Egbe Italian Wedding ofe?
Omenala, peppercorns onyinye eji ya, nke yiri obere peal. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta pasta ahụ, mkpịsị aka ma obu orzo pasta nwere ike iji.
Mylọ ahịa ebe a na-ere nri nwere aceti pepe pasta nke ọma na warawara pasta wara wara.
hot dog chili ihendori anaghi anu
Kedụ Ka I Si Eme Efere Italiantali?
Efere agbamakwụkwọ Italian bụ ụdị ofe dị mfe. Akụkụ nke na-ewe oge dị ukwuu bụ ịme anụ. You nwere ike iji nchikota anụ ọ bụla masịrị gị. Ngwakọta m kachasị amasị m bụ anụ ezi na anụ ehi ma ọ bụ ọkụkọ niile. Ọ na-amasị m ịkpụkọta anụ anụ n'ime ite ofe, iji tinye ụyọkọ ekpomeekpo ọzọ!
Jikere anụ bọọlụ na agba aja aja.
Nro eyịm, carrots & celery. Tinye ahihia na oge.
Ghichaa ofe na onyinye ma sie nri ruo mgbe pasta dị nro.
Tinye inine ma jee ozi.
Nwere ike iji anụ friji?
N'ezie nwere ike! Ọ na-amasị m ịme okpukpu abụọ nke ntụ ọka anụ ma kpoo ọkara ọzọ, ma mgbe m na-enweghị anụ ọ bụla e mere tupu oge ahụ, ana m erute maka akpa kachasị amasị m nke anụ ọkụ oyi. Naanị jide n'aka na ị na-eji obere anụ bọọlụ.
Nwere ike ifriizi Italian Wedding ofe?
Kpamkpam! Maka nsonaazụ kacha mma, ọ na-amasị m ịri ofe tupu agbakwunye pasta. Mgbe ahụ mgbe ị na-emegharị ofe ahụ, gaa n'ihu tinye pasta ahụ.
Creamy Erimeri Ahịa Chowder - ọgaranya na-atọ ụtọ
Ngwa Ngwa Ọka ọka Chowder - Jikere mgbe ị lọtara
Ibu Loss Akwukwo nri ofe Ntụziaka - agụ ọkacha mmasị
Ite Nri Chicken Noodle Nri - ngwa ngwa!
Nduku Leek Ofe - nkasi obi na nnukwu efere
Nri Anụ Stroganoff - efere beefy bara ọgaranya!
Oge Nkwadebeiri abụọ Nkeji Oge nriiri abụọ Nkeji Oge zuru ezu40 Nkeji Ọrụ6 servings Onye edemedeAmanda Batcher Obi na kpochapụwo, stovu a dị mfe Italian Wedding ofe na-ezukọ ngwa ngwa ma zuru oke maka nri izu ụka ọ bụla! Bipute Ntụtụ
▢8 ounce Anụ ehi akwọrọ akwọ
▢8 ounce anụ ezi ala
▢½ iko bred ọhụrụ
▢3 tablespoons pasili ọhụrụ mebiri
▢1 ngaji nnu kosher
▢½ ngaji oregano kpọrọ nkụ
▢½ ngaji ose oji
▢½ iko Parmesan chiiz shred
▢1 buru ibu akwa
▢abụọ tablespoons mmanụ oliv
▢1 tablespoons mmanụ oliv
▢1 ọkara odo yabasị mebiri
▢abụọ buru ibu karọt peekpu ma muo
▢abụọ okporo celery okpokoro
▢½ ngaji nnu kosher
▢¼ ngaji Fikiere dil
▢½ iko mmanya ọcha
▢9-10 iko ọkụkọ efere
▢1 iko Fikiere peppercorns tapawa
▢5 ounce nwa inine gbanwere
▢shredred Parmesan chiiz maka ije ozi
Tinye ihe oriri niile nke anụ ọkụkọ ma e wezụga mmanụ oliv na nnukwu efere agwakọta. Jiri nwayọọ gwakọta ruo mgbe agwakọtara ya. Mee ka n'ime obere bọọlụ, ihe dị ka 1 inch na dayameta.
Kpoo mmanu oliv okpukpu abụọ n'ime nnukwu oku di iche na n'elu oke oku. Tinye ihe dị ka ọkara nke anụ ahụ ma sie ihe dị ka minit 3 n'otu akụkụ, gbanwee agba aja niile. Nyefee na efere. Tinyegharịa na fọdụrụ meatballs.
Add 1 tablespoon mmanụ oliv na otu oven oven ma belata okpomọkụ na ọkara dị ala. Tinye yabasị, carrots na celery ma sie 5 nkeji, ruo mgbe ọ ga-adị nro. Tinye garlic ma sie nri 30 sekọnd, ma ọ bụ ruo mgbe keisi. Oge nnu, ose, na dil.
Tinye mmanya na deglaze pan, na-ehicha ala nke ite ahụ na ngaji osisi iji mee ka ibelata agba aja ọ bụla. Tinye okuko okuko ma weta obụpde.
Tinye pasta na meatballs na ite ma sie nkeji asatọ, rue mgbe pasta dị nro ma sie anụ. N'ime oge ikpeazụ nke isi nri, tinye akwụkwọ nri ma hapụ ya.
Na-eje ozi na-ekpo ọkụ, fesa ya na cheese nke Parmesan shred.
Calorisị:Ogbe 382,Carbohydrates:iri abụọ na otug,Protein:22g,Abụba:iri abụọg,Abụba Ajuju:6g,Cholesterol:91mg,Sodium:Ogbe 961mg,Potassium:Ogbe 622mg,Eriri:abụọg,Sugar:3g,Vitamin A:6440IU,Vitamin C:12mg,Calcium:192mg,Iron:3.2mg
IsiokwuOfe Italian Wedding, ofe uzommeputa N'ezieOfe Esie ya.TalianEnd SpendWithPennies.com. Ọdịnaya na foto bụ ihe nwebisiinka. Ringkekọrịta nke uzommeputa a gbara ume ma nwee ekele. A machibidoro ibipụta na / ma ọ bụ ịzigharị usoro nri zuru oke na mgbasa ozi ọhaneze. Biko lee iwu ojiji iji foto m ebe a .